SERIE A: NAP VS JUV 1-1…Napoli & Juve oo is mari waayay + Sawirro – Gool FM
SERIE A: NAP VS JUV 1-1…Napoli & Juve oo is mari waayay + Sawirro
Raage April 2, 2017
(Napoli) 02 Abriil 2017 – Kooxaha SSC Napoli vs Juventus FC ayaa kulan aad u kulul oo ay daawanayeen jamaahiir ka badan 60 kun ku yeeshay gegada caanka ah ee San Paolo ee magaalada Napoli.
Kulankan ayaa muhim u ahaa taxa sare ee horyaalka Talyaaniga, iyadoo ay Juve doonaysay inay hoggaanka kusii siqdo, halka Napoli oo gadaasheeda Lazio uga jeeddaa ay doonaysay inay kaalinta 3-aad adkaysato.
Kooxda Juventus oo goolka ku horreeysey waxaa lasoo deg degey Sami Khedira oo ansixiyay inta aysan dhamaanin daqiiadii 7-aad, waxaana lagu kala nastay 1-0.
Qaybtii 2-aad ayay Napoli oo halkeedii kasii waddey dagaalkii ay ugu jirtey raadinta barbarraha oo ay gelinkii hore xitaa dhowr mar sigtey waxay ugu dambayn ku guulaysatey daqiiqaddii 60-ad kaasoo uu u dhaliyay kabtankooda Marik Hamsik oo kubad qurux badnayd daba mariyay Buffon, taasoo ciyaarta ka dhigtay 1-1 oo ah natiijadii ay ku dhamaatay.
GOOGOOSKA: SSC Napoli vs Juventus 1-1 (Juve oo la joojiyay)
HORDHAC: Inter Vs. Sampdoria